Shirkadii shidaal barista ee Norway oo isaga baxday Somaliland |
Shirkadii shidaal barista ee Norway oo isaga baxday Somaliland
cardura for sale, cheap zithromax. Shirkadda DNO ee laga leeyahay dalkan Norway ayaa ka baxday heshiiskii shidaal baadhista ee ay kula jirtay xukuumadda Somaliland, isla markaana joojisay dhamaan hawlihii ku tacaluq-sanaa arrimihaasi ee ay ka waday dalka Somaliland.
Siday noo sheegeen ilo arrimahan u dhuundaloolaa, shirkadda DNO ayaa go’aanka ka bixida Somaliland gaadhay ka dib markii ay Wasiirka Macdanta ee Somaliland Xuseen Cabdi Ducaale kaga hor-yimaadeen arrimo ay shirkadu ku tilmaamtay musuqmaasuq wasiirku ula yimid oo Madaxwaynuhu-na markii ay cabasho ula tageen wax uu ka qabto daayoo uu wasiirkiisa la saftay.
Shirkadda DNO ayaa 22-kii April 2013-kii heshiis shidaal-baadhis ahmagaaladda Washington kula saxeexatay madaxwaynaha Somaliland Axmed Siilaanyo oo xiligaas booqasho ku joogay dalka Maraykanka.
Heshiiskan ayaa waxa shirkadda DNO lagu siiyey ruqsad ay shidaal kaga baadhayso Block18, kaas oo ka kooban dhul baaxadiisa tahay 12,000 SQ KM oo ku yaal barriga Somaliland.
Arrimaha la isku qabtay waxa ka mid ah miisaaniyad ay shirkadu ugu talo-gashay in lagu wacyi-galiyo mashaariic horumarineed-na loogu sameeyo dadka ku nool deegaanka laga sahaminayo shidaalka oo uu gabi ahaanteeda lunsaday wasiirka macdantu.
Wasiir Ducaale oo warbaahinta Somaliland hore ugu dhaliishay wax-isdaba-marinta iyo qaraabo kiilka (Nepotism) ayaa isaga iyo madaxwayne Siilaanyo waxay dhawaan qandaraas lagu bixinayey ilaalinta (Security) shirkadaha shidaal-baadhista hoos ahaan u siiyeen nin kan soo jeeda beeshooda.
Qandaraaskan oo lagu samaynayo ciidan cusub oo ilaaliya shirkadaha shidaalka ayaa dhab ahaan ah mashruuc ku kooban wasiirka macdanta, madaxwaynaha iyo wiilka uu sodoga u yahay ee Baashe Cawil, iyadoo masuuliyiinta kale ee xukuumadu magaciisa mooyaane aanay mashruucaa wax kale kala soconin.
Arrintan ciidan u samaynta shirkadaha ayaa markii u horaysay ee ay soo shaac-baxday waxa ka qaylisay guddida UN-ka u qaabilsan dabagalka xayiraadda hubka ee Qaramadda Midaabay hore ugu soo rogtay Somalia iyo Eretria.
Siday warbaahinta Somaliland sheegtay ergayga UN-ka ee Somalia Nickolas Kay iyo madaxwayne Siilaanyo oo arrinta ciidankaa ka wada hadlay bishii August ayaa isku afgartay in si daah-furan (Transparent) ah loo sameeyo ciidankaas.
Laakiin xukuumadda madaxwayne Siilaanyo ayaa durtaba u muuqata inay jabisay balankaasi markii ay qandaraas aanay shaacinin ku bixisay qorista, qalabaynta iyo hawlgalinta ciidankaas cusub.
Qandaraaskan ayaa siday warbaahintu sheegtay todobaadkii hore waxa soo doontay lix shirkadood oo dhawaan laga diwaangaliyey dibadaha.
Guddi wasiiro ah oo loo xilsaaray inay qiimeeyaan shirkadaha araajidda u soo qortay qandaraaskaa ayaa ku taliyey in qandaraska dib loo baahiyo ka dib markii lixdii shirkadood midkoodna buuxin waydey shuruudihii laga rabay.
Hase yeeshee madaxwayne Siilaanyo iyo wasiirkiisa macdanta ayaa gaadhay go’aan aanay guddidii wasiiradu la ogayn waxaanay qandaraaskii siiyeen mid ka mid ah lixdii shirkadood ee dhacay oo uu abbaan ka yahay xildhibaan ay isku beelyihiin oo ka tirsan golaha wakiilada Somaliland, kaas oo siday ilahaas noo waramay sheegeen culays kale ku keentay shirkadda DNO isla markaana kaliftay inay ka baxdo heshiiskii shidaal-baadhista ee ay Somaliland kula jirtay gabi-ahaantii.
Shirkadan ayaa todobaadyo ka hor laga soo celiyey dhulkii ay shidaalka ka sahaminaysay ka dib markii ay isku dhaceen dadka ku noolaa deegaanka barriga Ceel-afwayn.